Wararka - Noocyada Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedyada La Taaban karo 9-8
Noocyada Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedyada La Taaban karo 9-8
Qalabka dhismaha ee la taaban karo, sifooyinkiisa gaarka ah waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu abuuro cunsur dhisme. Waa in lagu shubaa caaryada sida gaarka ah loo qaabeeyey, ee loo yaqaan 'formwork or shuttering'.
Qaab-dhismeedka wuxuu ku hayaa shamiinka la shubay qaab ilaa uu ka adkaanayo kana gaarayo xoog ku filan si uu isu caawiyo una qaabeeyo miisaanka maaddada. Qaab dhismeedka qaabab badan ayaa loo kala saari karaa:
Meesha lagu isticmaalo
Qaab dhismeedka ayaa door aasaasi ah ku leh dhismaha la taaban karo. Waa inay lahaato awood ku filan si ay u qaaddo dhammaan culeysyada jira inta lagu jiro hawlgallada tuurista, oo waa inay markaas xajisaa qaabkeeda inta ay adagtahay la taaban karo.
Waa kuwee Shuruudaha Shaqo-Wanaagsan?
In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo qaab dhismeedka ah, kuwa soo socdaa ayaa ah qaabab guud oo waxqabad si loo daboolo baahiyaha dhismaha la taaban karo:
Awood u leh culeyska culeyska orso.
ku hayso qaabkeeda taakuleyn ku filan.
Caddayn la taaban karo oo la taaban karo
Jajaban oo aan waxyeello gaarin marka aad foomka ka saareyso.
Waxyaabaha dib ayaa loo isticmaali karaa loona isticmaali karaa inta ka dhiman nolosha.
Waxyaabaha foomka lagu sameeyo waa in aysan dhalanrog ama qalloocin.
Noocyada qaab-dhismeedka maaddada:
Qaab dhismeedka alwaaxda
Qaab dhismeedka alwaaxa ayaa ka mid ahaa noocyadii ugu horreeyay ee qaab dhismeed ee abid la isticmaalo. Waxaa lagu soo ururiyey goobta waana nooca ugu jilicsan, ee si fudud loo qaabeeyey. Faa'iidooyinkeeda:
Si fudud loo soo saaro loona saaro
Khafiif, gaar ahaan marka la barbar dhigo qaab-dhismeedka macdanta
Shaqeyn kara, jidaynayey qaab kasta, cabbir iyo dherer qaab dhismeedka la taaban karo
Dhaqaale ahaan mashaariicda yar yar
Kuu ogolaanayaa isticmaalka alwaaxda deegaanka
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaa jira cillado:waxay leedahay cimri gaaban oo waqti badan ayey ku qaadataa mashaariic waaweyn. Guud ahaan, samaynta alwaaxda waxaa lagu taliyaa marka kharashka shaqadu uu hooseeyo, ama marka qaybaha adag ee la taaban karo ay u baahan yihiin qaab dhismeed jilicsan, qaab dhismeedka wax badan laguma celin.
Plywood waxaa badanaa loo isticmaalaa alwaax. Waa alaab alwaax laga soo saaray, oo lagu heli karo cabbirro iyo dhumuc kala duwan. Codsiyada qaab-dhismeedka, waxaa badanaa loo adeegsadaa xoqidda, qurxinta iyo xiritaanka foomamka.
Shaashadda Plywood waxay leedahay astaamo la mid ah sida alwaaxa loo sameeyo, oo ay ku jiraan xoog, adkeysi iyo fudeyd.
Qaab dhismeedka birta: Birta iyo Aluminium
Shaqo-sameynta birtu waxay noqoneysaa mid caan ah sababo la xiriira cimri dhererkeeda iyo dib u isticmaal badan. In kasta oo ay qaali tahay, sameynta birta ayaa waxtar u leh mashaariic fara badan, waana ikhtiyaar wax ku ool ah marka fursado badan oo dib loo isticmaali karo la filayo.
Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee qaab-dhismeedka birta:
Xoog leh oo waara, oo leh cimri dheer
Waxay ku abuurtaa dhammaystir siman dusha sare ee shubka
Waxay yareysaa saamaynta malabka ee la taaban karo
Si fudud loo rakibay oo lakala furfuray
Ku habboon qaabdhismeedka qalooca
Qaab-dhismeedka Aluminium wuxuu aad ugu eg yahay qaab-dhismeedka birta. Farqiga ugu weyni waa in aluminiumku leeyahay cufnaan ka hooseysa birta, taas oo ka dhigaysa qaab-dhismeedka fudud. Aluminium sidoo kale wuxuu leeyahay awood ka hooseysa birta, tanna waa in la tixgeliyaa ka hor intaan la isticmaalin.
Foomka caaga ah
Qaab-dhismeedka noocan ah waxaa laga soo ururiyay alwaaxyo isku-dhafan ama nidaamyo qaabaysan, oo ka samaysan caag fudud oo adag. Qaab dhismeedka balaastiggu wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa mashruucyada yaryar ee ka kooban hawlaha soo noqnoqda, sida guryaha guryaha ee qiimaha jaban.
Qaab dhismeedka balaastiggu waa mid fudud waana lagu nadiifin karaa biyo, iyadoo ku habboon qaybaha waaweyn iyo dib u isticmaal badan. Dhibaatada ugu weyn ee haysata waxay leedahay dabacsanaan ka yar alwaaxda, maadaama qaybo badan horay loo sii diyaariyay.
Kala saarida qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab dhismeedka
In lagu qoro maaddo, qaab-dhismeedka waxaa sidoo kale loo kala saari karaa iyadoo loo eegayo astaamaha dhismaha ee la taageeray:
Qaab dhismeedka darbiga
Qaab dhismeedka Slab
Qaab dhismeedka dogob
Qaab dhismeedka aasaaska
Dhammaan noocyada qaab-dhismeedka waxaa loogu talagalay iyada oo loo eegayo qaab-dhismeedka ay taageerayaan, qorshooyinka dhismaha ee u dhigma ayaa qeexaya qalabka iyo dhumucda loo baahan yahay. Waxaa muhiim ah in la ogaado in dhismaha qaab-dhismeedku uu qaadanayo waqti, wuxuuna matali karaa inta udhaxeysa 20 iyo 25% kharashyada dhismaha. Si loo yareeyo qiimaha shaqada, tixgeli talooyinka soo socda:
Qorshayaasha dhismuhu waa inay dib u isticmaalaan walxaha dhismaha iyo joomatari intii suurtogal ah si ay ugu oggolaadaan dib-u-isticmaalidda qaab-dhismeedka.
Markaad la shaqeyneyso sameynta alwaaxa, waa in loo kala jajabiyaa qaybo waaweyn oo ku filan in dib loo isticmaalo.
Dhismayaasha la taaban karo waxay ku kala duwan yihiin qaabeynta iyo ujeeddada. Sida go'aannada mashruuca badankood, ma jiro ikhtiyaar ka fiican inta kale dhammaan codsiyada; qaab-dhismeedka ugu habboon ee mashruucaagu wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran naqshadda dhismaha.
Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskuxidhka Birta Cuplock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock,